Sunday October 14, 2018 - 20:44:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Barnaamijka Faafreebka wararka ee ka baxa Idaacadda Islaamiga Andalus ee ku hadasha afka Xarakada Al-Shabaab ayaa caawa baahisay magacyada qaar ka mid ah saraakiishii lagu dilay qaraxyadii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Sawir Hore Magaalada Baydhabo
Dadka ay Idaacaddu baahisay magacyadooda ayaa isugu jira Xildhibaanno, Saraakiil ciidan, Ergooyinka soo xulay xildhibaanada iyo xubno ka tirsan maamulka isku magacaabay Koonfur Galbeed ee ka dhisan magaalada.
Khasaaraha dhimashada ayaa gaaray ilaa 25 ruux, waxaana jira dhaawacyo intaas ka badan oo lagula tacaalayo Isbitaalada magaalada sida ay sheegayaan Saraakiisha maamulka Beydhabo.
Halkaan Ka Dhageyso Magacyada Ay Heshay Andalus.
Faah Faahin: Sarkaal caddaan ah oo kamid ahaa saraakiishii ku dhintay qaraxii Tixsiile.